FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA : Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja
Eo anatrehan’ny ady atrehin’ny Malagasy iray manontolo ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina corona virus dia misy hatrany ireo olona mpanaparitaka vaovao tsy marina, manely tsaho manakorontana saim-bahoaka. 27 mars 2020
Manoloana izany indrindra, dia efa mikaroka ireo olon-dratsy mpanao izany, mpanompa na koa maniratsira olona amin’ny tambazotran-tserasera fesiboky, indrindra moa fa ny tsaho aparitaka momba ity corona virus ity, ny eo anivon’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. Raha ny loharanom-baovao voaray omaly dia tranga miisa 16 no nanokafana fanadihadiana raha toa ka olona iray kosa no efa nampidirina am-ponja manoloana ny fanelezana vaovao tsy marina. Efa nisy ny vokatra raha ny fanazavana voaray satria dia tranga miisa fito hatramin’ny omaly alakamisy no nanokafan’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka fanadihadiana.
Saika efa hita avokoa ireo olona sasany niafina tao ambadik’izany. Fantatra tamin’ny tatitra voaray hatrany moa fa efa tontosa ny famotorana ireo olona miisa efatra tamin’izy ireo, ny iray tonga dia nampidirina am-ponja vonjimaika, nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny telo. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana ireo olona telo ambiny. Ankoatra ireo dia mbola nisy tranga miisa sivy teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena izay nanokafana fanadihadiana lalina. Ny iray tamin’izy ireo moa dia voalaza fa efa tratra ary nahazo fahafahana vonjimaika rehefa avy natolotra ny Fitsarana. Ny valo amin’ireo tranga dia mbola ao anatin’ny fanatanterahana ny famotorana amin’izao fotoana izao.
Vehivavy mitonona ho mpanao gazety karohina
Eo anatrehan’ity fanelezana tsaho, manakorontana saim-bahoaka ity hatrany dia fantatra ihany koa fa nisy vehivavy iray nitonona ho mpanao gazety nanaparitaka filazana tamin’ny tambazotra fesiboky fa misy olona aman-jatony voan’ny aretina corona virus eto Madagasikara. Vaovao izay tena diso tanteraka ary tsy misy akory saingy entina hampitahorana olona fotsiny tsotra izao, hoy ny mpitandro filaminana.
Eo anatrehan’ity tranga ity dia efa mikaroka io vehivavy io fatratra ny eo anivon’ny fitondram-panjakana ka izay olona manome vaovao marim-pototra mahafantatra io olona io, ny mombamomba azy rehetra na koa mahita ny toerana misy azy dia toloran’ny Fanjakana valisoa avy hatrany, izay vola mitentina 05 tapitrisa ariary. Andrasana sy arahina akaiky ny tohin’ity raharaha ity.
Rangahy manodidina ny 40 taona tratram-badiny nanolana zaza valo taona TOAMASINA (133) 28 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (99) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (98) 26 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (73) 28 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (63) 28 mai 2020 Nirefodrefotra ny basy teny Ampanefy, jiolahy 3 azo sambo-belona FANAFIHANA (56) 26 mai 2020